Resadresaka niarahana tamin'i Patrick Andy, mpitendry gitara beso malagasy any Etazonia | POPMUSE.MG
Resadresaka niarahana tamin’i Patrick Andy, mpitendry gitara beso malagasy any Etazonia
14 Fév 2016 par Calliope 6860 POPs
Tera-tany malagasy izy ary monina any Etazonia anyizy ary mpanakanto feno sy manan-talenta tokoa . Araho eto ny fizarana nataony niaraka tamin’ny ekipan’ny POPMUSE momban’ny lalana nodiaviny tao anati’ny tontolon’ny mozika.
Azonao lazaina ve hoe inona no karazana mozika lalaovinao ?
Mitendry any am-piangonana no tena ataoko, ka hira Evangelique izany no tena matetika tendreko. Ankoatran’ izay dia mitendry mozika hafa isan-karazany koa aho (variete, RnB, Rock, World Music, jazz, …). Moa tsindraindray voaantso any amin’ny studio koa manao enregistrements. Ataoko daholo izay azo atao, raha tsy hoe ratsy loatra ny parole-n’ny hira. Izay ihany no conditions-ko.
Nisy fotoana koa aho invite tany amin’ny sekoly jazz eto New York nanazava ny mozika Malagasy. Manana ny tarikako manokana aho, antsoina hoe Patrick Andy Band. Nitendry tany amin’ny jazz clubs sy fiangonana eto Etazonia. Fa mikarakara album vaovao ankehitriny, ka somary nijanona kely aloha ny fitendrena miaraka amin’ny tarikako mandram-pivoakan’io album vaovao io.
Ary farany dia mikarakara album miaraka amin’ny Trio izay aho. Eli Menezes no gitara (Richard Bona, Lauryn Hill, …), Carlito Mendoza amin’ny bateria (Guitar Center Drums Off Champion 2012). Tokony ho vita ato ho ato ny album, fa somary sahirana kely satria occupes be daholo izahay telolahy.
Mba tantarao anay hoe tahakiny ahona ny niatomboanao teo amin’ny sehatry ny mozika ?
Nitendry tany am-piangonana tany Madagasikara no niantombohako tamin’ny gitara basy, 1994. Somary nitendry gitara tao an-trano fotsiny aho nandritra ny 6-7 taona talohan’izay. Na dia tao an-tsaiko aza ny hoe ho lasa musicien no tena asako, dia tsy dia nanam-potoana loatra aloha tamin’ny voalohany satria namita fianarana tany amin’ny Polytechnique Vontovorona (Entre parenthese, tsy vita ny fianarana satria tamin’izaho nikarakara memoire dia nilaozako nandeha nitendry fotsiny dia farany leo be ny encadreur). 1996 aho nivoaka voalohany tany ivelany – Suisse – niaraka tamin’i Ifanihy. Taorian’izay vao tena tapa-kevitra fa hiezaka mafy mba hitendry mozika no atao asa.
Taona vitsivitsy taorian’io dia lasa nampandihy tamin’ny DIAP. Io angamba no tena hoe « sekolin’ny mozika »-ko satria fara-fahakeliny izahay nitendry 2 na 3 isak’erinandro, ankoatran’ny repetitions. Dia nanomboka niara-nitendry tamin’ny tarika vaovao maro nalaza tany Madagasikara avy eo, toy ny Imagine. Dia avy eo koa nitendry tamin’ny tarika mpampandihy maro isan-karazany – merisenera moa ny fiantso ny musiciens tahaka izay taloha, tsy haiko hoe misy terme vaovao ve izao -. Dia avy eo nahazo contrat nandeha aty Etazonia niaraka tamin’ny tarika antsoina hoe Top Mozika.
Tahaka ny ahoana no amaritanao io karazana mozika lalaovinao io ?
Ny mozika lalaoviko moa izany dia:
– « Patrick Andy Band »: « World Music » angamba no akaiky indrindra. Kanefa matetika raha vao miteny hoe « World Music » dia tonga ao an-tsaina ny hoe « traditionel ». Nefa ilay izy koa marina fa Malagasy, fa tsy « traditionel » be loatra, satria musicien Amerikana no miara-mitendry amiko ka mazava ho azy fa tsy pur Malagasy ilay izy. Azo antsoina koa hoe « Jazz » ilay satria betsaka ny solo aminy, kanefa tsy « Jazz » pur koa ilay izy. Mety azo antsoina hoe « Gospel » koa satria ny tononkira dia manandratra an’ Andriamanitra, kanefa koa tsy « Gospel » pur ilay izy. Tsy haiko ny mamaritra ilay mozika satria style isan-karazany no mikambana ao, fa rhythme Malagasy – indrindra fa Salegy – no tena fototra, dia misy Rock sy Jazz sy Gospel ny fanampiny.
– Trio miaraka amin’i Eli Menezes sy Carlito Mendoza: « Fusion » angamba no azo hiantsoana azy. Rock sy Jazz sy Funk sy World Music mifangaro ilay izy.
Mitondra ny anarana hoe « Dera » ny raki-peo farany navoakanao, misy dikany manokana ve izany ?
Araka ny voalazako teo aloha moa dia mikarakara album vaovao aho ankehitriny. « Mifalia » no mety ho titre-ny. Any ho any amin’ny volana Mai na Juin no mety hivoaka ilay izy. Efa manao mix izahay ankehitriny ka tokony ho vita ato ho ato ilay izy. « Dera »no « Single » navoaka tamin’ny herintaona, hira iray ao anatin’ny album « Mifalia ». « Dera » no niantsoana ilay hira satria fankasitrahana an’ Andriamanitra noho ny fitiavany sy famonjeny io hira io. Ny hira rehetra amin’io album vaovao io moa izany dia Evangelique daholo ny tonon-kira, fa ny rhythme dia Malagasy 100% miaraka amin’ny musiciens « Gospel » sy « Jazz » avy eto New York. Misy Malagasy iray antsoina hoe « Bema Bass » koa mitendry gitara akostika sy percussion amin’io album vaovao io.
Tsikaritray amin’ny sary fa tena miavaka tokoa ny gitaranao. Azonao ambara ve ny mombamomba iny gitara iny ?
Misy compagnie mpanao gitara basy ao Brooklyn antsoina hoe « Fodera ». Namako akaiky rizareo. Nanamboatra gitara ho ahy izy dia vita tamin’ny 2008 ilay izy. Emperor II no anarany, 6 cordes. Misy sarina trondro eo amin’ny 12eme case, symbole-na Kristiana io. Moa ao ambadika misy ny sora-tanako hoe « Andriantsialonina » (izay noi tena prenom-ko, fa tsy voatonon’ny vahiny ilay izy dia navadika hoe « Andy » dia amin’izay mora kokoa ny mitady azy amin’ny internet). Nosoratako tanana ilay hoe « Andriantsialonina », dia tsy haiko hoe ahoana no fomba lasa nametrahan-drizareo tao ambadik’ilay gitara basy. Ity moa misy lien azo hijerena azy: EMPEROR II
(Moa mino aho fa misy sary hafa vitsivitsy ao amin’ny internet ahitana azy koa). Fa misy gitara Fodera hafa 4 cordes koa izao no tena fitendriko, NYC4 Empire Bass no anarany. Efa tsy nanamboatra io modele io intsony ry Fodera ka ilay ahy io no anisan’ny farany. Nosoloin-ndrizareo ny micro tao anatiny tamin’ny 2014, dia lasa manana feo « moderne » be dia be ilay izy.
Ianao ve milalao miaraka amin’ny tarika hafa ? Ahoana ndray ny amin’zay lafiny izay ?
Misy vitsivitsy ny tarika hafa hiarahako. Hisaorana an’ Andriamanitra fa tafaraka mitendry amin’ny musiciens isan-karazany. Matetika dia lovan-tsofina (« Word of mouth » … tsy haiko aho hoe inona no dikany amin’ny teny Gasy fa miala tsiny indrindra) no ahazahoana ireo contrats ireo. Ohatra hoe miara-mitendry amia musiciens aho androany, dia tenenin-drizareo any amin’ny namany any, ka rehefa misy mitady basista ny namany dia miantso ahy rizareo. Toy izay no matetika ahazahoako asa aty. Ny tena hoe lakile ahazahoana ireo asa ireo moa izany dia na dia ohatran’ny hoe « kely » na « tsy dia misy dikany » aza ny contrats indraindray, dia tsy maintsy vitaina tsara sy hajaina tsara ilay izy satria mety hahazahoana contrats hafa goavana kokoa io.
Ianao koa moa izany efa niara-niasa tamina artista efa mpisehatra iraisam-pirenena tahakan’i Wyclef Jean. Nanao ahoana ny fifandraisana tamin’azy sy ny traikefa azonao tamin’izany?
Nisy fotoana izy nitady basista, dia ny manager-ny sy ny batteur-ny tamin’izay fotoana izay nahafantatra ahy, dia niantso ahy rizareo. Ny traikefa tena azoko taminy dia tsy maintsy miasa mafy ianao raha te ho tafita. Izy dia zara raha maka aina, miasa foana, na arrangement, na enregistrement, n’inon’inona raha misy hifandraisany amin’ny mozika dia ataony foana. Na rehefa mandeha tournee aza izahay dia matetika razoky no miasa rehefa any amin’ny chambre-n’ny hoteliny.
Ianao dia vahiny any an-tanin’olona kanefa mamiratra. Manao ahoana ny fandraisan’ny amerikanina an’izany ?
Ilay izy aloha tsy hoe « mamiratra » e. Araka ilay voalazako teo aloha fotsiny dia manaja tsara ny asako aho, dia fantatry ny olona aty izay zavatra izay, dia tian-drizareo ny miara-miasa amiko. Ny tiako hotenenina amin’ilay hoe « manaja », dia tonga ara-potoana foana aho, tsy manao « fotoan-Gasy » :). Na koa hoe rehefa tokony hianatra hira vaovao dia hianarana tokoa ilay izy ka hay tsara iny rehefa tonga ny fotoana hitendrena azy na hanaovana repety.
Dia satria efa henon’ny olona fa marim-potoana sady vonona foana aho, dia mahafinaritra ny fandraisan-ndrizareo.
Aty koa moa be ny vahiny avy any Europe na Afrique na Amerique du Sud, etsetra etsetra, dia efa zatra ny aty miara-miasa amin’ny olona tsy avy eto Etazonia.
Azo heverina iany ve ny oe mety hisian’ny malagasy hafa hamiratra toa anao any etazonia na tsy eo amin’ny sehatry ny zava-kanto aza ?
Misy mihintsy ny Malagasy fantatry ny olona eto. Tsy te-hanonona anarana aho sendra sanatria misy adinoko, fa raha ny zava-kanto manokana aloha dia misy vitsivitsy isika eto. Tsy voatery hoe eto New York fotsiny ary fa na any amin’ny Etats hafa. Misy basista Malagasy hafa eto, percussioniste, saxophoniste, chanteurs, danseurs, ets … Vao nisy namana Malagasy hafa avy any France ary nifindra eto New York, ary tena mahafinaritra ny fitendriny clavier. Ankoatran’ny zava-kanto dia tsy dia mahafantatra olona maro aho aloha fa dia aleo tsorina ny marina Na izany na tsy izany dia mahafantatra vitsivitsy aho hoe misongadina tsara rizareo any amin’ny asany.
Betsaka ve ny malagasy matihanina misehatra eo anivon’ny zava-kanto any Etazonia any ?
Azo lazaina hoe betsaka ihany, raha comparer-na amin’ny pourcentage-n’ny Malagasy eto Etazonia, fa vitsy raha comparer-na amin’ny isan’ny matihanina Malagasy any Frantsa. Araka ny voatonoko teo aloha dia fantako fa misy basista hafa eto, dia percussioniste, saxophoniste, chanteurs, danseurs, mpitendry clavier, ets … Mino aho fa mbola misy hafa koa any fa tsy mbola fantatro.
Ary manahoana ny fifandraisana amin’izy ireo sy ny tera-tany malagasy hafa any?
Ny Malagasy eto Etazonia dia tena manome hasina ny fihavanana. Mahafinaritra ny fiarahana sy fifanampiana eto. Na dia somary occupes aza ny tsirairay, moa sady tafapetraka mifanalavitra ny ankamaroany, dia matetika no mifampiresaka tsy voatery hoe mivantana, fa amin’ny alalan’ny telephone na internet.
Inona avy ny zavatra nataonao no tena hoe tadidinao hoe « special »?
– Niara-nitendry tamin’i MeShell Ndengeocello (basista vehivavy Amerikana) tao amin’ny Blue Note New York tany ho any amin’ny 2006-2007 – tsy tadidiko tsara -. Niantso namana aho ho avy, hay « Sold out » ilay show, dia tsy tafiditra ny namako moa tsy nisy azoko natao hampidirana an-drizareo.
– Efa im-bitsivitsy aho no nanao enregistrement tamin’ny musiciens somary malaza, fa nahafinaritra ahy ny nanao enregistrement « live » tany Houston-Texas tamin’ny artista Afrikanina antsoina hoe Uche Agu, satria ny batteur nanao ilay enregistrement dia antsoina hoe « Chris Coleman », malaza izy amin’ny musiciens. Volana vitsivitsy taty aorian’ny nivoahan’ilay album dia hitako tao amin’ny aeroport tany Afrique Du Sud ilay CD Moa raha tsy diso aho dia nahazo Grammy betsaka tany Afrique ilay album io.
– Nanao enregistrement tany Montreal niaraka tamin’ny artista fantatra any Canada antsoina hoe Nikki Yanofsky aho tamin’ny herintaona. Izay ny enregistrement voalohany nataoko any ivelan’ny Etazonia, ka tsy andriko ny hivoahan’io album io amin’ity taona ity angamba.
Misy hafatra ve tianao ampitaina ho an’ny artista malagasy ?
Ny tena tiako holazaina angamba izany dia tsy misy maha-menatra ny maha-Malagasy e. Tsy vitan’ny hoe tsy misy maha-menatra aza, fa tena rehareha ny hoe Malagasy. Isika dia tena manana ny mampiavaka antsika manokana mihintsy. Tsy maninona ny mianatra sy maka tahaka ny ara vahiny, fa raha isika Malagasy aza tsy miezaka manandratra ny antsika, iza indray moa no hanao azy eo?
Betsaka isika Malagasy no tena mahay, koa dia aleo mifanampy. Indraindray koa isika indrisy no « tsy tafita » satria « tsy mahalala olona », fa aza atao mahakivy izany fa tohizo hatrany, amin’ny fotoana mampety azy ho fantatry ny olona ihany hoe tsara ny zavatra ataonao.
Ankehitriny koa, noho ny fisian’ny internet, dia afaka mianatra zavatra maro isika, koa aleo hararaotina izay. Ary ny tena zava-dehibe indrindra dia ankino amin’ Andriamanitra ny zava-drehetra, fa ny fiainana fandalovana ihany
Isaorana indrindra i Patrick Andy tamin’ny fifampizarana. Mankasitraka feno !!
Afaka arahinao amin’ny alalany tranonkalany koa ny vaovao rehetra momban’i Patrick Andry ao amin’ny www.patrickandy.com
1610 pops |   Partager
1510 pops |   Partager
3061 pops |   Partager
3 401 799 pops